Good Will Hunting တွင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Matt Damon နှင့် Robin Williams တို့သည်ယခု Hulu တွင်ရှိနေသည် - Netflix သတင်း
Good Will Hunting တွင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Matt Damon နှင့် Robin Williams တို့သည်ယခု Hulu တွင်ရှိနေသည်
Matt Damon နှင့် Ben Affleck (Jim Smeal / WireImage မှဓာတ်ပုံ)
ခက်ခဲသောသူများရာသီ ၃ - Hulu သည်တတိယအကြိမ်မြောက်စီးရီးအသစ်ကိုသက်တမ်းတိုးသည် ကံဆိုးသောပွဲစဉ်များ - Netflix တွင်နောက်တွဲယာဉ်နှင့်ဖြန့်ချိမည့်နေ့
Good Will Hunting ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Matt Damon နှင့် Robin Williams တို့သည်ယခု Hulu တွင်လွှင့်ထုတ်နိုင်ပြီဖြစ်သည်။
ရုပ်ရှင်ပရိသတ်တွေနဲ့ Hulu မှာယူသူတွေအတွက်သတင်းကောင်းတွေအများကြီးရှိတယ်။ လွန်ခဲ့သောအနှစ် ၃၀ အတွင်းအကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်တစ်ခု။ ကောင်းသော Will မုဆိုး နိုဝင်ဘာလ၏အဖြစ် Hulu အပေါ်စီးဆင်းယခုရရှိနိုင်ပါ!
မသိသူများအတွက် Matt Damon နှင့် Ben Affleck Good Will Hunting အတွက်ဇာတ်ညွှန်းရေးသည်။ Gus Van Sant သည်ရုပ်ရှင်ကို ၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင်ပြသခဲ့သည်။ Matt Damon နှင့် Ben Affleck တို့သည် Robin Williams, Stellan Skarsgårdနှင့် Minnie Driver တို့နှင့်အတူရုပ်ရှင်တွင်လည်းသရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
ရုပ်ရှင်ထဲတွင် Will Hunting (Matt Damon) သည်မက်ဆာချူးဆက်နည်းပညာတက္ကသိုလ်တွင်အစောင့်အကြပ်အဖြစ်လုပ်ကိုင်ပြီးပါရမီရှိသောပါရမီရှိသောလူငယ်တစ် ဦး သည်တရားရုံးအမိန့်ပေးသည့်ဒေါက်တာ Sean Maguire (ရော်ဘင်ဝီလျံ) အားတရားရုံးအမိန့်ပေးခဲ့သည်။ Will ၏နယ်နိမိတ်များကိုကျပြီးသူ့ကိုဖွင့်ပေးရန်။
ထိုရုပ်ရှင်သည် ၁၉၉၈ အကယ်ဒမီဆုပေးပွဲတွင်အော်စကာကိုးခုအတွက်အမည်စာရင်းတင်သွင်းခြင်းခံရပြီးအကောင်းဆုံးဇာတ်ညွှန်းဆုနှင့်ရော်ဘင်ဝီလျံအတွက်အကောင်းဆုံးအထောက်အကူပြုသရုပ်ဆောင်ဆုရရှိခဲ့သည်။
ကျနော်တို့အောက်ကရုပ်ရှင်များအတွက်နောက်တွဲ shared! ၎င်းကိုစစ်ဆေးပြီးသင် Hulu ကိုကြည့်ရှုရန်သင်စိတ်ဝင်စားမည့်တစ်ခုခုနှင့်တူသည်မလားကိုကြည့်ပါ။
ကောင်းသော Will မုဆိုး ကျိန်းသေ Hulu အပေါ်အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင် 50 ၏အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ထည့်သွင်းပါလိမ့်မည်! ကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း၎င်းသည်လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်သုံးခုအတွင်းအကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်ကားများဖြစ်သည်။ သင်ဘယ်သူနဲ့စကားပြောနေတယ်ဆိုတာပေါ်မူတည်ပြီးလူအများကဒီရုပ်ရှင်ဟာအရင်ကလုပ်ခဲ့ဖူးသမျှထဲမှာအကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်တွေထဲကတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မယ်။ ဒါဟာသေချာဘို့င်ငါ့အတိုစာရင်းတွင်ကျိန်းသေပါ!
ဘယ်အချိန်မှာမထင်မှတ် Hulu ပေါ်ထွက်လာပါဘူး
daredevil ရာသီ2လူဆိုး
အစစ်အမှန်ရာသီ3Premiere
Netflix ရဲ့အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်မေလ 2017